Loka vaovao amin'ny volana febroary ho toy ny volana an'ny Heart amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Loka vaovao amin'ny volana febroary toy ny Heart Month amin'ny Apple Watch
Tsy misy isalasalana fa ny Apple Watch dia manao olona maro izay tsy nanao fanatanjahan-tena isan'andro mba hanao izany. Izany rehetra izany dia ampahany amin'ny hadisoan'ny fampiharana Fampiasa amin'ny fitaovam-tanana izay manosika antsika sasany loka, fanamby ary stickers ho an'ny app Messages.
Tamin'ity volana ity ihany, nisy mpampiasa sasany diso nahazo ny zava-bita sy ny tanjona tamin'ny volana febrily nefa tsy nihaona tamin'izy ireo akory, ny sasany tamin'izy ireo dia nilaza taminy ny fampiharana Apple Watch fa mila mandany salanisa isan'andro mihoatra ny 25.000 Kcal na mihazakazaka marathon 6 ... Toa efa voavaha io ary ankehitriny ny zavatra omanin'i Apple dia fanamby ho an'ny hetsika vaovao boribory feno amin'ny herinandron'ny 8-14 Febroary.
Vantany vao vita ny herinandron'ny Asa Ireo mpampiasa izay mahomby dia handray ireto medaly ireto hanampiana mivantana ireo zava-bita tratrarina teo aloha ary sticker telo vaovao handefasana hafatra mihetsika miaraka amin'ny fampiharana Apple Messages. Izao no voalaza ao amin'ny famaritana ity fanamby vaovao ity:
Manaova zavatra tsara amin'ny fonao ary mahazoa zava-bita vaovao. Akatony ny peratra fanatanjahan-tena mandritra ny fito andro misesy manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 14 feb.
Raha tsy te ho mihoatra ny fitaovana hafa fotsiny hampirisihana ny mpampiasa hifindra, ny Apple Watch sy ny fampiharana ny Akany indraindray dia manatanteraka ireo karazana fanamby izay voafaritra sy lany daty, izany hoe, tsy azo avy amina endrika hafa ankoatry ny fanatanterahana ny hetsika mandritra ny andro nomanin'ny orinasa. Na izany na tsy izany dia tsara foana ny manao fanatanjahan-tena ary raha manana Apple Watch ianao dia tsy isalasalana fa fomba iray hafa handrisihana ny tenanao hanomboka aminy. Amin'ny farany, ireo mahazo tombony amin'ity karazana fanamby ity hatrany no mpampiasa hatramin'izay ny fampihetseham-batana dia tsara ho an'ny vatantsika, zavatra ezahin'i Apple apetraka amin'ny olona rehetra manao ny iray amin'ireo famantaranandrony eny an-tànany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Loka vaovao amin'ny volana febroary toy ny Heart Month amin'ny Apple Watch